ကျမရဲ့နေရာလေး: သူတို့ အခေါ်...တာထေးမ :P
သူတို့ အခေါ်...တာထေးမ :P
ဒီတခါတော့ အလုပ်သမားတွေနဲ့ ကျမ ၄ လ အတူတူအလုပ်လုပ်ရင်း သူတို့ အကြောင်း၊ ကျမတွေ့ ခဲ့၊သိလာခဲ့တဲ့အကြောင်းလေးတွေ နဲနဲအာလူးပေးအုံးမယ်လေ....။
သံတိုင်တွေကိုင်ထားတဲ့ကောင်လေးက ကန်ထရိုက်တာရဲ့ သားလေး....
အိမ်လာဆောက်ပေးတဲ့အလုပ်သမားတွေက အာခါ လူမျိုးတွေဆိုတော့၊ အာခါစကားအဓိကပြောတာပေါ့။
လက်သမားကြီးတွေကတော့ ပြည်မက မြန်မာတွေပါ။သူတို့ လည်း အာခါအမျိုးသမီးတွေနဲ့ 
အိမ်ထောင်ကျပြီး၊ ကလေးရလာတော့လည်း အာခါစကားနဲ့ ဗမာစကားဘဲပြောတယ်...။
ရှမ်းပြည်မှာနေကြပေမဲ့ရှမ်းစကားမတတ်ကြပါဘူး..။ ဒီတော့ ကျမနဲ့ ဗမာစကားဘဲပြောပါတယ်။
ဗမာစကားမပီတဲ့ရှမ်းမနဲ့အာခါသံဝဲနေတဲ့ ဗမာစကားပြော အာခါလူငယ်လေးတွေ ရဲ့ အသံ...
ကျမတို့ အိမ်မှာတော့ ဆူညံနေတာပေါ့ ...။သူတို့ ကျမကိုခေါ်တာလည်း..တရုတ်တွေလိုဆိုရင်..
လောပန်း အမျိုးသမီးဆိုရင် လောပန်းညန်..ဆိုပါတော့။ ရှမ်းလို ပေါလိန့် မယ်လိန့် ...လေ...။
ဗမာလို သူဌေး၊သူဌေးမ...။ ဒါပေမဲ့ ..တိုင်းရင်းသားတွေက တ နဲ့ သ မကွဲဘူးလေ...။
ဒီတော့..တခါလေလည်း တေထေးမ..တခါတခါ တာထေးမ...ဒီလိုဘဲကြားတာဘဲ...:P
သူတို့ ခေါင်းဆောင် ကန်ထရိုက်တာကြီး က သူ့ ကိုအလုပ်အပ်တဲ့ ကျမကို ခေါ်လို့ သူတို့ လည်း
လိုက်ခေါ်တာပေါ့။ နယ်မှာက ဒီလိုပါဘဲ...အလုပ်ရှင်ကိုသူဌေးလို့ ခေါ်တာထက် လောပန်း..လောပန်း..
နဲ့ ခေါ်ကြတယ်။ ကျမလည်း တခါခါခေါ်ခံရတာ နဲနဲဘဝင်လေဟပ်ချင်ပေမဲ့ တေထေးမ..ဆိုတာကြီးတော့၊
ဆန့် တငင်ငင်နဲ့ ဘဝင်လေက မဟပ်တဟပ်...အဟီး.... :P
ဒါက ကျမရဲ့ ကန်ထရိုက်တာကြီးပေါ့...။တကယ်ကိုစိတ်နှလုံးဘဘောထားပြည့်ဝတဲ့ လူတော်တယောက်ပါ။
သူ့ စတိုင်က ဘောင်းဘီစိမ်း( ဗကဗ ဘောင်းဘီခေါ်မလားဝတပ်ဖွဲ့ ဘောင်းဘီခေါ်မလား..ဒီပုံစံဘဲ..
အမြဲတမ်းဝတ်ပါတယ်)။ သူ့ အနောက်က ကျမရဲ့ အမ ပါ...။ သူက ကျမတို့ မြို့ လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း ၂ဝကျော်အချိန် ပထမဦးဆုံး ၃ ထပ်တိုက်ကြီးဆောက်တော့ (အဲဒီအချိန် ကမြို့ မှာရိုးရိုးမိရိုးဖလာ
အိမ်ဆောက်တာတွေဘဲရှိတယ်လေ..) အလုပ်သမား တော်တော်များများကို လက်သမား၊ပန်းရံ ဆရာတွေ
ပေါ့..အားလုံးတောင်ကြီးကနေခေါ်လာရတယ်။ ကျမအိမ်နဲ့ တအိမ်ကျော် မှာရှိတဲ့ ၃ထပ်တိုက်ကြီးပေါ့...။
ကျန်တဲ့အလုပ်ကြမ်းသမားတွေက မြို့ က လူတွေပါ...။ အဒီတုံးက သူက ပန်းရံ လက်သင်ပေါက် စ လေး
တဲ့...။ သူ ကြိုးစားလုပ်ရင်း...(သူ့ ဆရာတွေလည်းကျုိုင်းတုံ မြို့ မှာဘဲ အခြေချနေထိုင်ကြတယ်လေ) တဖြေးဖြေးနဲ့ တိုးတက်လာလိုက်တာ..လောလောဆယ်တော့ မြို့ မှာ နံမည်ကျော် ကန်ထရိုက်တာ
ဆရာကြီးတဆူဖြစ်နေပြီလေ...။လက်ရှိဆောက်ရင်းတန်းလန်း ဆိုက်တွေအိမ်တွေ၊၁ဝ ဂဏန်းလောက်ရှိ တယ်...။အရမ်းသပ်ရပ်ပြီး လျင်မြန်တယ်။ သူ့ မှာအလုပ်သမား(အာခါတွေချည်းဘဲ
ရာဂဏန်းနီးပါးရှိတယ်လေ၊ သား၊အကို၊ခဲအို၊ယောက်ဖ၊တူ၊တူမ...အိုး...ဆွေတော်မျိုးတော် တသိုက်
လုံးပါဘဲ...) ကိုယ့်ငါးချဉ်ကိုယ်ချဉ်၊ အဲလေ....ကိုယ့်ပေါင်ကိုလှန်ထောင်းပြောရမယ်ဆိုရင် ရှမ်းတွေက သူတို့ လောက်လုံ့ လဝိရိယအားထုတ်မှု့ မယဉ်နိုင်ဘူး..။သူတို့ ကအကြမ်းခံတယ်။ ဟိုးတချိန်တုံးက မြို့ အုပ်ချုပ်သူဂုံရှမ်းတွေ သူတို့ ကိုတခြားနံမည်တမျိုးနဲ့ ခေါ်ပြီး လူတန်းစားခွဲခြားမှု့ တွေရှိခဲ့တယ်။
ဒီအချိန်မှာတော့ နံမည်ကြီး တေထေးအုပ်စုတွေမှာ သူတို့ လူမျိုးတွေတန်းစီနေတာဘဲ...။
ပြည်မကလာတဲ့ လက်သမားဆရာကြီး ၃ယောက်..အိမ်ရှေ့ ကွပ်ပြစ် ကိုရွှေ့ ဖို့ လုပ်တော့ လေးလွန်းလို့ ၊
၂ ခြမ်းခြမ်းလိုက်ရတယ်...။ အဝါရောင်အင်္ကျီနဲ့ ဦးလေးကြီးရဲ့ သား၊ လွှတိုက်နေတဲ့လူရဲ့ သမီးလည်း၊
ဒီအတွဲကတော့ ယောက်ကျားက လက်သမား..မိန်းမကအထွေထွေအလုပ်ကြမ်းသမား...
ရွှာဦးကျောင်းက ဘုန်းကြီးကျိုင်းတုံမှာ ရောက်လာတော့ သူ့ တကာရင်းတွေကိုလှမ်းခေါ်တာတဲ့.။
ဒီမှာလုပ်စားရတာ အဆင်ပြေတယ်ဆိုလို့လင်မယား ခလေးငယ်လေး၂ယောက်နဲ့ လာခဲ့တယ်။
အကြီးဆုံးတယောက်ကိုတော့ ရွာမှာဘဲထားခဲ့တယ်တဲ့။ရောက်တာ ၄နှစ်ကျော်၅ နှစ်၊ဟိုတလောက ခဏ
ပြန်တာ မနေတတ်တော့ဘူး...ဒီမှာဘဲအခြေချပြီးလုပ်ကိုင်စားသောက်ဖို့ ဆုံးဖြတ်ထားတယ်တဲ့...။
သာစည်နားက ရွာလေး..ကလို့ ပြောပါတယ်...။ တနေ့ ကို လင်မယား ၂ယောက်ပေါင်း ၁သောင်းေ ကျာ် ဝင်ငွေဟာ.သူတို့ ဆီမှာ ကောက်စိုက်လို့ ဘယ်လိုမှမရနိုင်ဘူးတဲ့..။
အိမ်မှာကျန်ခဲ့တဲ့ခလေးတွေစားဖို့ တခါလေကျမမုန့်ပေးလိုက်တတ်တယ်..ကျေးဇူးတင်လွန်းလို့ 
ကန်တရိုက်တာကြီးယောက်ဖ နဲ့ တခြားပန်းရံဆရာ...
ပြည်မကလာတဲ့ ပန်းရံ ဆရာ....သူ့ အမျိုးသမီးက အာခါရွှာမှာ ခေါက်လန်ဖွန်း ရောင်းတယ်တဲ့...။
လက်သမား၊ပန်းရံ ဆရာတွေကကိုယ်ပိုင်ဆိုင်ကယ်နဲ့ လာကြပြီး...၊ကျန်တဲ့အလုပ်သမားတွေက ကန်ထရိုက်တာသားမောင်းတဲ့သုံးဘီးကားလေးနဲ့ လာကြပါတယ်...။အဲဒီနေ့ က ကျမရှမ်းနှစ်ကူးဖွင့်ပွဲ အခန်းအနား သွားနေတုံး..အောက်ခြေဘိလပ်မြေခင်းတာနေ့ တဝက်နဲ့ ပြီးသွားလို့စောစောပြန် ကြတာလေ..။
နေ့ လည်ထမင်းစားပြီးရင် ဖဲကစားဖို့ ကျမက ဖဲထုတ်ဝယ်ပေးရတယ်....:))
အဲဒါမီးဖိုဆောင်နေရောလေ..။အပြင်ထွက်နေတဲ့ နေရာကျဉ်းကျဉ်းလေးကို ဟင်းချက်တဲ့မီးဖိုခုံထားမလို့ ..။
သူလေးကတော့ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်အာခါပါ ဘုန်းကြီးကျောင်းသားဟောင်းတဲ့...။
တရုတ်အမေနဲ့ ရတဲ့သူ့ အမကဈေးထဲမှာအထည်ရောင်းပြီး ပိုက်ဆံပေါတဲ့ တရုတ်မကြီးရယ်....။
သူ့ အမေက အာခါဖြစ်ပြီး သူ့ ဘဝအကြောင်းကိုပြောပြရင်းမျက်ရည်လေးတွေကျနေပါတယ်...။
သူ့ မိန်းမက ရခိုင်၊ ကလေး၂ယောက်အမေပါ ..:))
အိမ်ရောက်ရင် ထမင်းအိုးတည်၊ ကလေးအဝတ်ဖွတ်၊ အိမ်သိမ်းတာဝန်ပါထမ်းဆောင်ရပါတယ်တဲ့...။
သူ့ ကို တခြားလူတွေက ခွေးပုလို့ ခေါ်တယ်..မင်းကြောင့်ငါတို့ ယောက်ကျားနံမည်ပျက်တယ်ဆိုပြီး၊
ဝိုင်းဘေကြတာတွေ့၇တယ်...အော်..အချစ်မှာ မျက်စိ မရှိဘူးတဲ့..ဟုတ်လား..။
မျက်နှာတအားချိုပြီးဖင်ပေါ့ပါတယ်...။ဒါပေမဲ့ လုပ်သမျှ တလွဲတွေပါ....^_^
သျှားခြစ်တယ်ဆိုတာ ကြားဖူးကြမှပေါ့..။ သူခေါင်းကိုက်လို့ တဲ့...သျှားခြစ်ထားတယ်။
ကောင်မလေးက အားချိန်မှာ အထည်ချုပ်ပါတယ်...။
တပိုင်းကို ၅ဝဝဝ ကျပ်နဲ့ ရောင်းလို့ ရတယ်ဆိုပါတယ်...။
သူ့ ကောင်လေးကိုသင်ပေးနေတာ..လေ..။ကောင်လေးလည်းသူပါထိုးတတ်တယ်လို့ ပြောတယ်။
ကျမတောင်းဝယ်ပါတယ်..သူတို့ မပြီးသေးလို့ တဲ့...။
အဲဒီကောင်လေးနဲ့ ကန်ထရိုက်တာရဲ့ သားက အတော်ဆုံးဘဲ...။
ဒီကောင်လေးက လက်သမားအဖိုးကြီးရဲ့ သား..အင်္ဂလိပ်မေဂျာ ဒုတိယနှစ်တဲ့...သီချင်းဆိုတာကို...
ကျမရေဒီယိုလေး တခုထားပေးရတယ်။ FM ချယ်ရီဆိုတာအလုပ်ထဲသူတို့ ရောက်တာနဲ့ နေ့ တိုင်း ဖွင့်တယ်
ဒီကောင်လေးက ဆပ်တောက်တောက်နဲ့ အားအားရှိ လ...ဆိုတဲ့စကားကနေစပြောတော့တာဘဲ...။
သူ့ ကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်လေး ပြောဆိုဆက်ဆံ၊ပြီး နဲနဲပါးပါး တနေ့ နဲနဲပညာပြတာတော့မဟုတ်ပါဘူး..။
ဆံပင်ကောက်ထားတာတွန့် လိမ်နေလို့ ..မာမာ့ခေါက်ဆွဲလို့ ကျမသူ့ ကိုအမည်ပေးထားတယ်..။
သူတို့ အားလုံးလည်း သူတို့ ဘဝအကြောင်းလေးတွေနဲ့ သနားစရာလေးတွေ....။
ကျောင်းနေချင်ပေမဲ့ မတတ်နိုင်လို့ ထွက်ရတာ..ချည်းဘဲ....။
အဲဒီအထဲမှာ စက်မှု့ တက္ကသိုလ်ကျောင်းသား ၃ယောက်လောက်ရှိတယ်...။
သူတို့ ဓါတ်ပုံတွေပြန်ရှာတာ မတွေ့ လို့ ...။
ဒီကချင်ကောင်လေးက မိုင်းခွန်ရွာက...အဲဒီရွာက ကချင်ရွာလေးပေါ့...။
ဟိုးအရင် စော်ဘွားတွေလက်ထက်ကတဲက စော်ဘွားတွေကချင်ပြည်သွားရင်းကချင်တွေကိုခေါ်လာခဲ့ပြီး ရွာတည်ထားပေးခဲ့တာလေ...။ကောင်လေးတို့ မိသားစုက ဆင်းရဲတယ်..။တောင်ယာခုတ်တယ်။
ကျမအမရဲ့ ကျောင်းသားဟောင်းပါ။ကျမအမက မတတ်နိုင်တဲ့ခလေးတွေဆိုရင် အလကားစာသင်ပေးတတ်တယ်..။အိမ်ကိုခေါ်ပြီး ကျုရှင်သဘောမျိုးအချိန်ပိုသင်ပေးတယ်...။
သူတို့ မိသားစုက အာခါရွာကိုပြောင်းလာတယ်...။သူလည်းအိမ်ဆောက်နေတယ်...။
သူ့ အဖေနဲ့ သူ့ ညီ၂ယောက်နဲ့ ကိုယ်တိုင်ချတာလေ...။
လိုတဲ့ သစ်ဟောင်း ပရိဘောဂ တံခါး..ဘာညာတွေကို ကျမက သူ့ ကိုပေးတာ..။
ည ၁၂ နာရီဖုံးဆက်ခေါ်လည်း သူတို့ က ဆရာမအတွက်အဆင်သင့်ဘဲ....။
ဒီကောင်လေးက ထော်လဂျီဆရာသမားလေ..မမရဲ့ တပည့်ပါဘဲ...ဆရာမခေါ်ရင် ဘယ်အလုပ်ဖြစ်ဖြစ်ပစ်ထားပြီး၊ ဆရာမဆီအရင်လာတတ်တယ်...။
ကျမရဲ့ လက်စွဲတော် ကားဆရာလေ...သူ့ သွားဖြူဖြူလေးပေါ်အောင်အမြဲတမ်းဟီးနေတတ်တယ်...။
သူတို့ ထမင်းစားရင် သနားစရာကောင်းတယ်..။ ကျမတခါခါ မုန်ညှင်းရွက်တို့ ချဉ်ပေါင်ရွက်တို့ ချက်ရင်၊
အိုးအကြီးကြီးနဲ့ ချက်ပြီး တခွက်အလယ်မှာချပေးလိုက်ပါတယ်...။
ရူးရူးရှဲရှဲနဲ့ ခဏအတွင်းပြောင်သွားတာဘဲ... ။
နေ့ လည် ၃ နာရီဆိုရင် နားချိန် လက်ဖက်သုပ်၊ ခေါက်လန်ဖွန်း၊ ထိုဖူးကြော်၊အချဉ်တခုခု၊
သူတို့ က ခေါက်လန်ဖွန်း..ဘာဘဲစားစားအဓိက ငရုတ်သီးမုန့် အသေကြိုက်ပါတယ်...။
အချိုမုန့် လာလာတောင်းတတ်လို့ ဝယ်ထားပေးရတယ်...။
အိမ်သာကျင်းနောက်တကျင်းတူးတော့ မုန့် ပုဂံကိုလည်း အောက်ချပေးရတယ်...။
ကျမတို့ မြို့ ထုံးစံလား...တော့မသိပါဘူး...။သူတို့ အခေါ် စလက်လောင်း..ဆိုလား...စလစ်လောင်းဆိုလား...။
ဘိလပ်မြေလောင်းတဲ့နေ့ ဆိုရင် ထမင်းကျွေးရတယ်တဲ့...။
သူတို့ ထမင်းသူတို့ ဖာသာဘယ်လာပြီးစားကြတယ်လို့ ပြောတယ်...။
ဒါပေမဲ့ ကျမကကျွေးမှတော့ အစုံဘဲကျွေးလိုက်တာကောင်းတယ်လေ....။
ဟုတ်တယ်နော်...သူများကိုကျွေးတာ စေတနာကောင်းကောင်းနဲ့ ကျွေးရင် ကိုယ်လည်း စိတ်ချမ်းသာ ကုသိုလ်လည်းရပါတယ်။ ဘုန်းကြီးလှုမှမဟုတ်ပါဘူး...။ဒါကကျမခံယူချက်ပါ..။
ဒါနဲ့ပထမထပ်ဘိလပ်မြေလောင်းတော့ ဝက်သားဟင်း၊ငရုပ်သီးထောင်း၊အစိမ်းကြော်၊မုန်ညှင်းဟင်းရည်၊
ခေါင်းလေးမော့နေတဲ့ကောင်မလေးက ကန်တရိုက်တာသားနဲ့ ရီးစားဖြစ်ပြီး ကျမပြန်လာတော့ မင်္ဂလာဆောင်တယ်လို့ ပြောပါတယ်...။ကောင်မလေး တော်တော်လှတယ်...။
ဒီကင်မရာဖက်ကိုလှမ်းကြည့်နေတဲ့ကောင်မလေးက လက်သမားဆရာတယောက်ရဲ့ သမီးလေးပါ...။
သူလည်း တလောက ယောက်ကျားယူသွားပြီလို့ ပြောတယ်..။
ဆရာကြီးများအဖွဲ့ ...နောက်ကျောက မြင်ရတဲ့အမည်းရောင်စပို့ ရှပ်နဲ့ က ကန်ထရိုက်တာရဲ့ တူ၊ သူ့ ကပ်ရပ်က သူ့ အဖေ ကန်တရိုက်တာရဲ့ ယောက်ဖ၊ ဒီပန်းရံ ဆရာလေးက အလုပ်လုပ်တာ.. အရမ်းသပ်ရပ်တယ်...။ တနေ့ ကြီးပွားမှာ...။ စိတ်ရှည်တယ်...မဖြစ်ဖြစ်အောင်လုပ်တတ်တယ်။
ကျမမချက်နိုင်လို့ အမေတို့ ရဲ့ လက်စွဲတော် (အရင်တုံးကဆေးလိပ်ခုံလုပ်တုံးကပေါ့၊သူတို့ သားအမိတွေ
အမေလည်းသူတို့ အမျိုးလုံးရဲ့ အဖွားဖြစ်သွားရော :))) သူတို့ ချက်ပြုတ်ပြီး အိုးခွက်ပုဂံကအစ စီစဉ်ပေးရတယ်။
အလုပ်သမားတွေအမြင်မှာ သူတို့ ပြောတာပါ...ကျမကထူးဆန်းတဲ့တေထေးမ..တယောက်တဲ့..:P
ဒီအလုပ်သမားကတော့ ညနေသူများပြန်တဲ့အချိန်မနက်မိုးလင်းတဲ့အချိန် တနင်္ဂနွေနေ့ ဆိုရင် တကုတ်တကုတ်နဲ့ လုပ်နေရတာပေါ့...။
အဟီး....အာလူးမယ်ငီးလေ....(အမကသူ့ ဖုံးနဲ့ ရိုက်ထားတာ မသိလိုက်ဘူး..)
အားလုံးဘဲ ရွှင်လန်းချမ်းမြေ့ ကြပါစေရှင်~~~~
အရင်က ရေးခဲ့တဲ့ အိမ်ဆောက်နဲ့ ပတ်သက်တာလေးတွေ...
Posted by မီးမီးငယ် at 3:11 PM
Labels: house, အတွေ့ အကြုံ
Anonymous July 09, 2013 5:10 PM
That Baby Potato is so Sweet P Mee Nage!!!
မီးမီးငယ် July 10, 2013 11:57 AM
Sweet Potato is good for health.
You should take at least onceaday.
So come and join with sweet potato everyday ...
ဆုမြတ်မိုး July 09, 2013 8:21 PM
မမီးရယ်.....အိမ်ဆောက်တာနဲ့တစ်ခါမှမကြုံဖူးတော့မသိဘူးရယ်...ဟဲဟဲ..ရခိုင်တွေတိုင်းယောက်ျားနိုင်တာမဟုတ်ရပါဘူးဗျား) ခွိခွိ ဗဟုသုတလေးတွေဝေမျှပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးပါနော်.. ။ စကားမစပ် အဲဒီငရုတ်သီးထောင်းခွက်ကို တအားမျက်စိကျတာပဲ စားချင်လိုက်တာ
မီးမီးငယ် July 10, 2013 12:00 PM
ဟဟ...သူတို့ ပြောကြတာကို တဆင့်ပြန်ကြားရတာပါ..
သံပုရာသီး ညစ်ပြီး ရူးရှဲနဲ့ တီးကြတယ်လေ...
Anonymous July 09, 2013 10:09 PM
မီးမီးငယ် July 10, 2013 12:10 PM
ငရုတ်သီးထောင်းက နံနံပင်နဲ့ ငရုတ်သီးစိမ်း၊ကြက်သွန်ဖြူ ...
ဒါပါဘဲ..နံမည်ကိုက နမ့်ဖစ်အီကော ..တဲ့
အရင်က အာခါတွေကို အီကောလို့ ခေါ်တယ်..
ဘာဘဲဖြစ်ဖြစ် သူတို့ နဲ့ လုပ်ရတာ..
ဝက်သားနဲ့ မုန်ညှင်းစော ငရုတ်သီးထောင်း၊အသုပ်တခုခု..ဘဲ
အင်္ဂတေနဲ့ ခင်းပြီးအပေါ်ဆုံးထပ်ကို ဆိုလာပြားတွေ ရေတိုင်ဂီတွ..
အဲ..ဘာဘီကျုးပါတီလည်းလုပ်လို့ ရအောင်လို့ ...:P
Anonymous July 09, 2013 10:10 PM
တာထေးမကသဘောကောင်းတော့လူကောင်းတွေနဲ့ တွေ့ တာပေါ့လို့ .....း))
မီးမီးငယ် July 10, 2013 12:13 PM
AMK July 10, 2013 1:14 AM
အောက်ဆုံး က အလုပ်သမား က အတော်ဆုံးပဲပေါ့နော့ အလုပ်သမား aka မယ်လိန့် 
မီးမီးငယ် July 10, 2013 12:15 PM
မယ်လိန့် က မုန့် သည်လာရင်..
ခုတော့ ဒီမှာအလုပ်သမားကြီး ဖြစ်နေတယ်
မိုးငွေ့........ July 10, 2013 1:35 AM
တခြားတော့မသိဘူး မမီးပုံထဲက ခလန်ဖွန်းနီနီရဲရဲပန်းကန်ကိုပဲ သရေကျတော့တာ..
မီးမီးငယ် July 10, 2013 12:17 PM
ခလန်ဖွန်းထဲထည့်ဖို့ ငရုတ်သီးမှုန့် 
သပ်သပ်ဝယ်ပြီး နို့ မှုန့် ဗှုးကြီးနဲ့ ချထားပေးရတယ်..
သူတို့ ဗိုက်နာကြတာလည်းမတွေ့ မိဘူး..
Goldfish Lay July 10, 2013 11:34 AM
"သူများကိုကျွေးတာ စေတနာကောင်းကောင်းနဲ့ ကျွေးရင် ကိုယ်လည်း စိတ်ချမ်းသာ ကုသိုလ်လည်းရပါတယ်။ ဘုန်းကြီးလှုမှမဟုတ်ပါဘူး...။ဒါကကျမခံယူချက်ပါ..။"
အမကိုနောက်တွေ့ရင်တာထေးမ လို့ခေါ်ရမလား? လောပန်းလို့ခေါ်ရမလား? lol
မီးမီးငယ် July 10, 2013 12:19 PM
စူးနှယျလေး July 16, 2013 12:12 PM
နမ့်ဖစ်အီကော စားမယ် မမီး... သျှားခြစ်မယ်... :P တချို့တွေများ ကျောပြင်တွေပါခြစ်တာနော် ရဲပတောင်းထနေတာပဲ
မီးမီးငယ် July 17, 2013 1:53 PM
ခလေးညှင်းပမ်းမှု့ နဲ့ ..အဟီး